Mpikatroky Ny Zon’olombelona Malaza Ao Bahrain Nosamborina Noho Ny Fitsikerany Ireo Polisy Nitsoaka An-daharana Nanatevin-daharana Ny ISIS · Global Voices teny Malagasy
Mpikatroky Ny Zon'olombelona Malaza Ao Bahrain Nosamborina Noho Ny Fitsikerany Ireo Polisy Nitsoaka An-daharana Nanatevin-daharana Ny ISIS
Voadika ny 05 Oktobra 2014 13:54 GMT
Vakio amin'ny teny English, čeština , Français, عربي, Español, English
Nisambotra ilay mpiaro ny zon'olombelona Nabeel Rajab, hita amin'ity sary ity tamin'izy nandray fitenenana nandritra ny fivoriam-bahoaka tao Bahrain tamin'ny volana Mey 2012. Sary avy amin'i Ahmed Al-Fardan. Zon'ny mpamorona: Demotix
Nisambotra ilay mpiaro ny zon'olombelona malaza ao amin'ny firenena Nabeel Rajab, noho ny siokany indray i Bahrain.
Tonga omaly alina tao Bahrain i Rajab taorian'ny fitetezam-paritra nataony ho fampafantarana amin'ireo mpanao lalàna any Angletera sy any Eoropa ny faharatsian'ny fanajana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena, nampanantsoin'ny manampahefana izy androany noho ny sioka izay nolazainy fa “fikotrehana” fitaovam-piarovana ho an'ireo mpiadin'ny ISIS ny fitaovam-piarovana ao Barhain.
Teo anoloan'ny vondrona misahana ny heloka antserasera tao amin'ny Biraon'ny Fanadihadiana Heloka Bevava no nanaovana famotorana an'i Rajab amin'ny vesatra fiampangana “fanevatevana andrim-panjakana” tao amin'ny Twitter. Nahazo didy fisamborana izy avy eo ary nogadraina, ary eo miandry ny fotoam-pitsarana, izay fantatra fa hotontosaina ny 2 Oktobra 2014.
Tamin'ny volana Mey 2014, navotsotra tany am-ponja i Rajab rehefa avy nigadra roa taona an-tranomaizina noho ny fandraisany anjara tamina fihetsiketsehana ary voampanga ho “nanakorontana ny filaminam-bahoaka” tamin'izany. Nanozongozona ny fanjakan'ny nosy madinika [Bahrain], mpifanolo-bodirindrina amin'i Arabia Saodita ny “fihetsiketsehana goavana” nanomboka tamin’ ny 14 Febroary 2011. Tamin'ny taona 2012, noràran'ny governemantan'i Bahrain avokoa ny fihetsiketsehana sy fivoriam-bahoaka amin'ny endriny rehetra, noho ny ahiahy ara-piarovam-pirenena sy ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka.
Efa nizaka sazy telo volana an-tranomaizina i Rajab, izay mpitantana ny Ivon-toeran'ny Zon'olombelona ao Bahrain efa nofoanan'ny governemanta sy nolazaina fa fikambanana tsy ara-dalàna, noho ireo sioka navoakany momba ny Minisiteran'ny Atitany. Ny volana manaraka, Jiona 2012, nahazo sazy telo volana an-tranomaizina indray i Rajab noho ireo sioka hafa nosoratany momba ny Praiminisitra ao amin'ny firenena, izay teo amin'ny fahefana nandritra ny 43 taona. Nakarina fitsarana ambony avy eo ity didim-pitsarana ity, rehefa nahazo sazy roa taona an-tranomaizina indray noho ny fandraisany anjara tamina fihetsiketsehana i Rajab.
Androany vao maraimbe, nanambara ny minisitry ny atitany hoe:
The General Directorate of Anti-corruption and Economic and Electronic Security summoned Nabeel Ahmed Abdulrasool Rajab on Wednesday to interview him regarding Tweets posted on his Twitter account that denigrated government institutions.
Mr. Rajab acknowledged the charges and the case was referred to the Public Prosecutor.
Nampanantsoinan'ny Tale Jeneralin'ny Ady amin'ny Kolikoly sy ny Fiarovana ny Toekarena sy ny Elektronika i Nabeel Rajab Ahmed Abdulrasool tamin'ny Alarobia mba hanadihady azy mikasika ireo sioka nalefany tao amin'ny kaonty Twitter-ny izay manevateva andrim-panjakana.
Niaiky ireo fiampangana azy Andriamatoa ary napetraka ao amin'ny lehiben'ny Fampanoavana ny raharaha.
Mikasika ny lahatsoratra iray tato amin'ny Global Voices momba ireo Bahrainita mpikambana vaovaon'ny ISIS niseho tamin'ny lahatsary mandrahona ny fitondrana ao Bahrain izany sioka voalaza izany. Na dia tsy misy aza ny tarehimarika milaza mazava ny isan'ireo Bahranita nanatevin-daharana ny fikambanana extremista maherisetra, izay mifehy ny faritra midadasika ao Iraka sy Syria, ary mamono izay olona tsy manan-tsiny tsy tambo isaina mifanehatra aminy, Bahrainita efatra avy amin'ny fianakaviana akaiky ny fitondrana no hita amin'ilay lahatsary. Miantso ny vahoaka Sonita ao Bahrain ny lahatsary mba handray fitaovam-piadiana hanoherana ny governemanta sy ny vahoaka Shiita ao amin'ny firenena.
Ho setrin'ilay lahatsary nampiseho ny lietnà Mohamed Issa Al-Binali, izay nisintaka tao amin'ny tafika, dia hoy i Rajab naneho hevitra:
Fanintelony izao i Rajab, izay manana mpanjohy 239K ao amin'ny Twitter, no nenjehin'ny manampahefana noho ny siokany.
Mazoto maneho hevitra mahery amin'ny fitsikerana ny fihanaky ny fotokevitra mpampihorohoron'ny ISIS i Rajab rehefa nivoaka ny vaovao momba ireo Bahrainita nanatevin-daharana ny vondrona. Nisikera ireo manampahefan'ny governemanta izay nanasokajy ny fibodoana an'i Mosul ho “revolisionim- bahoaka” ihany koa izy. Hoy izy nisioka mikasika izany:
Manasokajy ny ISIS sy ny Al-Qaïda ho zava-doza goavana indrindra hoan'i Islamo ny mpitondra fivavahana ambony indrindra ao Arabia Saodita, saingy misy ireo mpanao politika ao Arabia Saodita sy ato amin'ny Helodrano no manasokajy ny fibodoan'ny ISIS an'i Mosul ho revolisionim-bahoaka
Nisioka ihany koa i Rajab fa tsy tokony ampiasaina ho fialàna bala amin'ny fahasimban'ny fepetran'ny zon'olombelona ao amin'ireo firenena Helodrano ny fanafihana ny ISIS:
international community has to watch how states like #Bahrain used war in #terrorism to target reformists and #HumanRights defenders #UK #US
— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) September 30, 2014
Tokony hijery ny fomba fampiasan'ny firenena tahaka an'i Bahrain ny ady amin'ny fampihorohorona mba hanaovana ho lasibatra ireo reformista sy mpiaro ny zon'olobelona ny fiarahamonina iraisam-pirenena
Alohan'ny fisamborana azy androany vao maraina, nandefa sioka hoan'ireo mpanjohy azy i Nabeel hoe:
انني لن اتألم لو تم سجني او قتلي لكن سيؤلمني كثيرا لو ان أحد تنازل عن حقوق الناس أو انحنى للظالم وانكسر
Tsy hahatsiaro miala aina aho raha gadraina na vonoina saingy hangirifiry aho raha misy olona miala an-daharana tsy handala intsony ny zon'olombelona na misy olona lasa mankatò ireo mpanao tsy refesimandidy
Samy naneho ny ahiahiny mikasika an'i Rajab ny Amerikana miaro ny Demaokrasia sy ny Zon'Olombelona ao Bahrain (ADHRB), ny Foiben'i Bahrain momba ny Zon'olombelona (BCHR), ary ny Ivon-toeran'i Bahrain mandala ny Zo sy ny Demaokrasia (BIRD) ary miantso ho amin'ny famotsorana azy.